"ဒီအဆိုးဆုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့" - Tele RELAY တစ်ခု: Maddox Chivan ဂျိုလီ-Pitt ကသူ့ဖခင် Brad Pitt နှင့်အတူတင်းမာမှုများဝန်ခံသည်
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "Maddox Chivan ဂျိုလီ-Pitt ကသူ့ဖခင် Brad Pitt နှင့်အတူတင်းမာမှုများဝန်ခံသည်:" အဆိုးဆုံး "ဖြစ်ပျက်ခဲ့
Maddox Chivan ဂျိုလီ-Pitt ကသူ့ဖခင် Brad Pitt နှင့်အတူတင်းမာမှုများဝန်ခံသည်: "အဆိုးဆုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့"
တချို့ရက်, Maddox Chivan ဂျိုလီ-Pitt ရှိပါတယ် တက္ကသိုလ်ကသူ့ပြန်လာလုပ်။ ၏မိသားစုတစ်စု၏အကွီးဆုံးအိန်ဂျလီနာဂျိုလီ နဲ့ Brad Pitt အများအပြားမျှော်လင့်သူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုရဖို့မျှော်လင့်နာရီပေါင်းများစွာများအတွက်အမဲလိုက်ခြင်းထားသော paparazzi, မလွတ်ခဲ့ပါဘူး။ ကမ္ဘောဒီးယား၏လုလင်ဇာတိနောက်ဆုံးတော့ကြေညာကြောင်းကောလာဟလများကိုတုံ့ပြန်ရန်သဘောတူညီခဲ့ သူ၏ဖခင်နှင့်အတူပဋိပက္ခများကို သုံးနှစျကျြော။ Maddox သေချာပေါက်ငြင်းပယ်တော်မမူကြောင်းစွပ်စွဲချက်။
"ဒီအဆိုးဆုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့" Maddox Chivan ဂျိုလီ-Pitt ကြေညာရန်အကြောင်းအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့ဖခင်ကသူ့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ကြွလာသောဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းရာတွင် မိမိအတက္ကသိုလ်တောင်ကိုရီးယားမှာတည်ရှိပါတယ်ထိုလုလင်သည်အလွန်သံသယဖြစ်ခဲ့သည်: "ငါသည်ဖွစျနိုငျသောအရာကိုမသိရပါဘူး"။ အဆိုပါကောလာဟလဒါအစစ်အမှန်သလိုပဲနှင့်နောက်ကျောစက်တင်ဘာလ 2016 ဖို့ခြိနျး။ ထိုအချိန်တွင် Brad Pitt နဲ့အိန်ဂျလီနာဂျိုလီမျက်ရည်နေစဉ်, ကောလာဟလသောဖခင်အကြံပြု သူမ၏ကလေးများနှင့်အတူအော်ခဲ့.
ထို့နောက်တိုင်အောင်, ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ကလေး၏ဝိသေသလက္ခဏာထင်ရှားပေမယ့်မခံခဲ့ရ ကောလာဟလတွေထူပြောနေတယ်ဆိုပြီးခဲ့ကြသည် နှင့်မောင်နှမ၏အကွီးဆုံးရည်ရွယ်။ အများအပြားကတပုဒ်သည့်ကြွေးကြော်သံပွဲစဉ်သောလူနှစ်ယောက်အထိအကြမ်းဖက်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံ ဖြတ်ဆက်ဆံမှုကတည်းကရှိခဲ့။ အဆိုပါသားတွေ့မြင်ဖို့မမျှော်လင့်ခဲ့ကြလိမ့်မယ် သူ့ဖခင် Brad Pitt ဒီအပူအငြင်းအခုံပြီးနောက်။
©© Mega / KCS ဖိထားပါ
အိန်ဂျလီနာဂျိုလီနဲ့သား Maddox တချို့က Beverl အတွက်စျေးဝယ်အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးနောက် Yves Saint Laurent စတိုးဆိုင်စွန့်ခွာ
PHOTO ။ အန်သိုနီ Delon တစ် rant တွန်း: "ငါခံမရပ်နိုင်
တိုး Poke နေ့စဉ်: Solskjaer
အဆိုပါစာရင်းအပြည့်အစုံ - - BGR Netflix နဲ့ 67 အသစ်သောရုပ်ရှင်နှင့်အောက်တိုဘာလ 2019 အတွက်မူရင်းပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်
PHOTOS ။ အစဉ်အဆက်ထက်ပိုပြီးစတိုင်! Pepe Muñozသည်သူ၏သစ်ကိုခရီးစဉ်များအတွက် Celine Dion ကြည့်ထုတ်ဖော်ပြသ
တော်ဝင် Shock: Meghan Markle နှင့်ဟယ်ရီတော်ဝင်ဘဝကနေနုတ်ထွက်နိုင်တယ်လို့ - "ဘယ်အရာကမှသူတို့ကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်"
အိန္ဒိယ: Center က J & K သည်အတွက်အာမခံလွှမ်းခြုံ4000 40 000 ကုဋေရူပီး sarpanchs ပေးဖို့စီစဉ်ထား | အိန္ဒိယသတင်း
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်4,670
TECH & Telecom2,095